Codka Beddelka ah: Sheeko Nin Dhalinyar ah oo ka socota Wajeer, Kenya - Equal Access International
Cabdi Kithiye wuxuu ahaa nin dhalinyaro ah oo aad u dhib badan sanadkii hore. Bulshooyinka ku nool tuuladiisa miyiga ah ee Tarbaj ayaa ku noolaa cabsi joogto ah oo ku saabsan weeraro ay geystaan ​​kooxaha xag-jirka ah ee rabshadaha wata ee ku wareegaya aagagga ballaaran ee Gobolka Wajeer, oo xuduud la leh Soomaaliya, waqooyi-bari Kenya.
Kithiye ma uusan aqoonin waxa la sameeyo iyo halka laga bilaabayo inuu wajaho caqabadaha ka hor imanaya bulshadiisa, laakiin wuxuu dareemay inay ku qasban tahay inuu tallaabo qaado.
Gobolka Wajeer, Kenya, waxaa lagu sharxay guduud
Kithiye waxaan la kulannay sanad ka hor Wajeer markii uu lahadlayay koox dhalinyaro ah kadib ciyaar kubada cagta ah oo ku saabsan khatarta xagjirnimada rabshadaha wata.
Macallimiintu way carareen, iyagoo ku qasbay iskuulada inay xidhnaadaan maalin kasta. Waxaan maqalnay warar sheegaya in kooxaha xag-jirka ahi ay weerareen tuulo ama ay u hanjabeen bulshooyinka ku nool xadka Soomaaliya, ”ayuu yidhi. “Hoos u qoto dheer, waxaan ogaa in halista ay sii kordhayaan mustaqbalkeenna khatar ku jiraan. Waxaan doonayay inaan wax sameeyo laakiin ma aan aqoonin halka aan ka bilaabayo. ”
Isla mar ahaantaana, EAI waxay duubtay mashruuc cusub oo loogu talagalay in lagu kordhiyo adkeysiga bulshooyinka ku hadla af-Soomaaliga iyo saameynta kooxaha xag-jirka ah ee rabshadaha wata, iyada oo xoogga la saarayo xoojinta awoodda maxalliga ah ee looga hortagayo dadaallada qoritaanka ee al-Shabaab iyo in la beddelo fikradaha la xiriira fikirka. rabshado firfircoon.
Mashruuca, oo laga fulinayo gobollada Wajeer, Gaarisa, iyo Nairobi - aagagga uu sida aadka ah u saameeyay weerarada joogtada ah ee xagjirnimada rabshadaha wata — wuxuu lahaa qayb gaar ah oo lagu xoojiyo dadka sida Kithiye.
Waxaan arkay iidheh Facebook ah oo weydiinaya dhalinyarada inay codsadaan barnaamij tababar si ay ugu xoojiyaan inay adeegsadaan aaladaha internetka iyo kan tooska ah si ay ugu fidiyaan farriin kale dhallinyarda sida joogtada ah uga soo horjeedda kooxaha xagjirnimada. Waxaan ku booday fursadda!
Kithiya waxay tilmaamaysay Xeryaha Farsamada ee EAI, kaas oo lagu qaban lahaa saddexda goobood ee mashruuca oo, markii ay noqotay, Kithiye wuxuu ka mid ahaa 28 codsadeyaal oo loo xushay inay tababar hal toddobaad ah oo tababar ah ku qabtaan Wajeer.
Xeryaha Farshaxanka ee EAI waxaa loogu talagalay in lagu xoojiyo awoodda, gaarista, iyo aragtida milkiilayaasha si loo abuuro awood, la isku halleyn karo, dhaqan ahaan la xariirta, iyo sheekooyin kale oo la taaban karo iyo dariiqooyin xoojinaya dhaqan-celinta bulshada, adkeysiga bulshada, wada-hadal kooxeed, iyo awood-siinta bulshada ee bartilmaameedka bulshooyinka.
Xeryaha Teknolojiyada, ayaa sidoo kale lagu qabtay gobollada Nairobi iyo Gaarisa, waxay abuureen hami u gooni ah, hoggaamiyeyaal loo tababbaray sidii ay ula xiriiri lahaayeen dhallinyarada ay isku da'da yihiin una qorsheeyaan mustaqbal ka xor ah colaadda.
Waxaan haystay baraha bulshada ee bulshada si aan uga hadlo halista ay kooxahani leeyihiin, laakiin halistoodu aad bay u badnaayeen. Waan bartilmaameedsan karay taageerayaashooda, oo meel walba joogey, xitaa tuuladeyda, ”ayuu yidhi si xaqiiqo ah.
Intii lagu gudajiray tababarka usbuuca ah, Kithiye iyo saaxiibadiisa Tech Campers waxay qaateen casharo ku saabsan xoojinta; sheekooyin ay adeegsadeen ururada xag-jirka ah ee rabshadaha wata iyo sheekooyinka ka soo horjeedda / sheekooyinka kale; sida loo abuuro ololeyaal internetka wax ku ool ah; ugu dambayntiina noqdeen kuwa saameyn ku leh nabadda.
Cabdi Kithiye (bidix) barashada xirfadaha cusub iyo fikradaha uu ku shaqeysto ee kaamka Tech
Wuxuu si xamaasad leh u qaatay fursaddii tababarka oo ugu dambayntiina ka qalin-jabiyay mid ka mid ah Isku-duwayaasha Nabadda ee Nabadda, isaga oo u xilsaaray inuu la yimaado ololihiisa u gaarka ah si uu uga caawiyo bulshadiisa sidii ay uga adkaan lahayd ugana gudbi lahayd caqabadaha sii kordhaya ee xag-jirnimada.
In kasta oo qaar ka mid ah saaxiibbadii kale ay doorteen inay olole ka galaan arrimaha sida rabshadaha ku saleysan jinsiga iyo waxbarashada gabadha, Kithiya waxay ka dhigtay xiisihiisa inuu ka hortago sheekooyinka ay faafinayaan kooxaha xagjirka ah ee rabshadaha wata.
Waxaan helay awood aad u xoog badan waxaanan dareemay inay jiraan wax aan ku caawin karo beeshayda xagga codkayga, oo waxaan bilaabay inaan siiyo sheekooyin kale oo dadka lagu siiyo boggaga baraha bulshada. Sidii aan dadka ugu sheegi lahaa waxa ay noloshu ahaan lahayd iyada oo aan laga cabsi qabin kooxaha rabshadaha wata, ayuu yidhi.
Maaddaama Kithiye iyo saaxiibbada kale ee Dhiirrigelinta Nabadda ay horay ugu sii socdaan mashruucyadooda iyo ololahooda, waxay bilaabeen inay dareemaan in shaqadooda adag ay ku leeyihiin saameyn wanaagsan.
“Waxay la macno tahay inay carruurtu tagayaan iskuullada, ganacsigu wuu sii kordhayaa maaddaama dadku aysan ka baqaynin inay u safraan meel kale, oo waxaa jiri doona wada-noolaansho weyn oo dhexmara bulshooyinka,” ayuu raaciyay.
Mustaqbalka waxaa iska leh dhalinyarada waxaanan dooneynaa inaan awood siino si ay si qumman u jaangooyaan wadadooda. - EAI Agaasimaha Bariga Afrika Cabdirashiid Xuseen
Ka sokow shaqada Wada-hawlgalayaasha Nabadda Nabadda iyo hawl-wadeennada kale, EAI waxay bilaabeen olole warbaahineed oo isbarbar socda iyada oo loo marayo raadiyaasha maxalliga ah si ay ula xiriiraan dad badan oo wata farriimo muhiim ah oo ku saabsan xag-jirnimada rabshadaha iyo baahida loo qabo in laga hortago dariiqa burburka leh ee ururada rabshadaha wata.
Waxaan soo jeedinay dagaalka ka dhanka ah xagjirnimada rabshadaha ah waxaanan siineyna dhalinyaradayada qaabab kale oo ay la falgali karaan, ooy kujiraan xarun horumarsan oo internetka ah halkaasoo ay ku badali karaan fikradaha iyo shabakada, ayuu hadalkiisa kusoo gabagabeeyay Hussein.
Iyada oo laga helo maaliyad ka socota Xarunta Gobolka ee Ka Qaybgalka Caalamiga ah ee Gobolka (GEC), EAI ayaa fulineysa Mashruuca Codadka Soomaaliyeed, oo looga golleeyahay dhisidda adkeysiga iyo ka hortagga sheekooyinka kooxaha rabshadaha wata iyo fariimaha Kenya iyo waddamada kale ee deriska la ah.